७२ औं आइसीसीआर स्थापना दिवस काठमाडौँमा मनाइयो - माइपोखरी न्युज
Home MAIPOKHARI NEWS ७२ औं आइसीसीआर स्थापना दिवस काठमाडौँमा मनाइयो
७२ औं आइसीसीआर स्थापना दिवस काठमाडौँमा मनाइयो
काठमाडौँ– भारतीय राजदूवासस्थित स्वामी विवेकानन्द सांस्कृतिक केन्द्रले ७२ औं भारतीय सांस्कृतिक सम्बंध परिषद (आइसीसीआर) स्थापना दिवस मनाएको छ ।
काठमाडौंको नक्सालस्थित होटल मेरियटमा यही २६ गते आयोजित सो कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शशांक कोइराला, बलिउड अभिनेत्री मनीषा कोइराला तथा नेपालका आइसीसीआरका पूर्व विशिष्ट विद्यार्थीहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
उक्त कार्यक्रमको उद्घाटन नियोग उप–प्रमुख नामग्य खम्पाले गरेका थिए ।
उक्त अवसरमा नेपालबाट आइसीसीआरका दुई प्रतिष्ठित पूर्व छात्रहरु–काठमाडौं विश्वविद्यालयका उपकुलपति डा. भोला थापा र नेपाल क्लियरिङ्ग हाउसका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत निलेश प्रधानले भारतमा अध्ययन गर्दाका आफ्ना अनुभवहरु सुनाएका थिए ।
अभिनेत्री मनीषा कोइरालाले पनि कार्यक्रममा आफ्ना बाल्यकाल र भारतमा प्रारम्भिक शिक्षा लिदा बटुलेका अनुभवहरु सबैसँग साटिन् । कार्यक्रममा विश्वभर छरिएर रहेका आइसीसीआरका पूर्व विद्यार्थीहरुको अनुभवलाई संकलन गरी भिडियोमार्फत प्रस्तुत गरिएको थियो ।
साथै, स्वामी विवेकानन्द सांस्कृतिक केन्द्रका विद्यार्थीहरुले सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थिए ।